That's so good, right?: At the Summer Home My First Time
At the Summer Home My First Time
သာသာယာယာရှိလှတဲ့ ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော့်ပါတနာကောင်မလေးနှင့် ကျွန်တော် ရက်အနည်းငယ်လောက် အချိန်အတူ ဖြုန်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခံရတဲ့အခွင့်အရေးက ပိုပြီးသာယာပါတယ်။ ကေသီနဲ့ အတူတူအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ ဂျွန်၊အဲလက်စ် နှင့် ကယ်လ်ဗင်တို့ လည်းလာမှာတဲ့။ နွေရာသီအပန်းဖြေအိမ်ကို ကျွန်တော်တို့နေရာ အိမ်ကနေ (၃)နာရီကြာအောင် ကားမောင်းသွားရတာ တင်္နလာနေ့ မွန်းတည့်ချိန်လောက် မောမောပန်းပန်းရောက်သွားကြတယ်။ နွေရာသီစံအိမ်ကြီးရဲ့ ပိုင်ရှင်က ဂျွန်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ တည်းခိုဖို့ အခန်း တွေရှိရာ သူလိုက်မပို့မှီ အိမ်ကြီးတစ်ပတ် လေကောင်းလေသန့်ရှူရှိုက်ရင်း ငေးဖြစ်ပါတယ်။
Oh! ဒီလောက်ကြီးပြီး လှပတဲ့ အိမ်မျိုး မမြင်ခဲ့ဖူးဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အိပ်ခန်းကလည်း အကျယ်ကြီး။ အိပ်ယာနှင့် အခန်းအနောက်မှာ ရေနွေး စိမ်ကန်ကြီးကပါသေး။ ကေသီနှင့် ကျွန်တော် ရေနွေးစိမ်ကန်နှုတ်ခမ်းပေါ် အတူထိုင်မကြရင်း တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် ကြည့် မိကြပါတယ်။ ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်လို့ပေါ့။ ညရောက်တော့ အတော်ပူနွေးနေတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ၀တ် ဆင်ဖြစ်ကြပါတယ် အ၀တ်အစားတွေကို။ ချည်သား ဘောင်းဘီတိုနှင့် လက်ပြတ်ရှပ်အင်္ကျီများ။ တစ်ညတာလုံး သူ့အကြောင်း ကိုယ့် အကြောင်းပြောရင်း အချိန်ဖြုန်းကြတယ်။ မဆိုးပါဘူး ကျောင်းစာပဲလုပ်နေရတာချည်းဆိုရင် ကျွန်တော်ဖားမှာ။ သူတို့တွေ ကျွန်တော့်မွေး ရပ်မြေ နိုင်ငံရဲ့ ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ စေတီများနှင့် အရသာရှိသော အစားအသောက်များအကြောင်း ပြောပြတော့ အသံကိုတိတ် နားကိုစွင့် လို့ပါပဲ။
အိမ်ကြီးထဲပြန်ရောက်တော့ ကယ်လ်ဗင်က အားလုံးသောက်ဖို့ သောက်စရာ ယမကာမျိုးစုံရောစပ်ပေးသလို၊ အဲလက်စ်က ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး စားသောက်စရာတွေကို ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ပေးတယ်။ ဂျွန်က အပူပေးထားတဲ့ ရေစိမ်ကန်ကြီးမှာ အညောင်းအညာပြေ အတူစိမ်ကြဖို့ အကြံ ပြုတော့ အားလုံး ဂျွန်သွားရာ အိမ်အနောက်ဘက်ကို လိုက်သွားကြတာပေါ့။ ဒီလိုအရွယ်အစားမျိုး ရေပူကန်ကြီးတစ်ခု အိမ်မှာ ထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားတာလည်း တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးခဲ့ဘူး။ နေ၀င်သွားတာကြာတော့ ကျွန်တော် နည်းနည်းချမ်းစပြုလာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ သောက် နေတဲ့ ယမကာတွေ အစွမ်းနှင့် သွေးနွေးလာတာပေါ့။ ကေသီနှင့် ကျွန်တော် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မြင်တွေ့ တွဲဖြစ်ကြတာ နှစ် ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ပြီးတော့ နည်းနည်းတော့ ရှက်ရွံ့မိပေမဲ့ သူမရဲ့ ကိုတော့ သဘောကျတယ်လို့ ပြောထားရဲ့။ ဂျွန်က ကျွန်တော်တို့တွေ အ၀တ်အားလုံးချွတ်ပြီးမှ ရေပူကန်ထဲ ဆင်းကြဖို့၊ ဘာကြောင့်ဆို ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေ အ၀တ်မှာကြွင်းကျန်ရစ်မှာ စိုးတာ ကြောင့်လို့ အကြံပြုပြောဆိုပါတယ်။ အိုကေပေါ့....ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ကျွန်တော်သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
ကေသီနှင့် ကျွန်တော် အ၀တ်တွေချွတ်ပြီး ရေပူကန်ထဲဝင်လိုက်ပါတယ်။ အိုး...ဖီလင်က တကယ်မိုက်တာပဲ။ အဲလက်စ် ကော့တေးလ် ခွက်တွေနှင့် လာသလို ကယ်လ်ဗင်ကလည်း စားသောက်စရာ တွေသယ်ဆောင်လာပါရော။ အဲလက်စ်နှင့် ကယ်လ်ဗင် အ၀တ်တွေ အားလုံးချွတ်ပြီး ရေပူစိမ်ကန်ထဲ ဆင်းကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာမှ မပြောမိပေမဲ့ သူတို့ ငပဲဆိုဒ်တွေကို သတိထားမိလိုက်ရဲ့။ နှစ် ယောက်လုံးဟာက ၇ လက်မ၀န်းကျင် ရှည်ပြီးတုတ်ကြတာပဲ။ ကျွန်တော် ဂျွန်ဘယ်မှာလဲ စူးစမ်းမိတော့ သီချင်းချိုချိုလေးတွေ စပီကာ အနှံ့မှ ကြားရပြီး ဂျွန်တစ်ယောက် အ၀တ်တွေချွတ်ကာ သူလည်းဆင်းစိမ်တယ်။ ကျွန်တော့်မှာ မျက်လုံးပြူးသွားရလောက်အောင် သူ့ဒစ် ကကြီးပါတယ် ကွမ်းသီးခေါင်းကလည်း မှိုပွင့်ကြီးကျလို့။
သူ့ကိုကျွန်တော်ခိုးကြည့်တာ ဂျွန်မိသွားတယ်။ 'Do you like dicks?
ကျွန်တော့်မျက်နှာတွေ ထူပူသွားသလို ရှက်လည်းရှက်သွားမိပါတယ်။ ဘာမှမပြောဘဲနေတော့ ဂျွန်ကလည်း ဆက်မမေးဘဲ ကျွန်တော့် နံဘေးကို လာထိုင်တာပေါ့။ ကျွန်တော့်ပခုံးတစ်ဘက်ကို သိုင်းဖက်ဖျစ်ညှစ်ရင်း သောက်ဖို့ယမကာခွက်ကို လှမ်းယူပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စူးစူးနစ်နစ်စိုက်ကြည့်ကာ 'Enjoy' တဲ့။
နာရီဝက်လောက် ရေပူကန်ထဲ စိမ်ကြပြီးနောက် အားလုံးကိုယ်စီထထွက်ကာ အ၀တ်တွေကိုဝတ် အိမ်ထဲကိုသွားကြတော့တာပေါ့။ ဂျွန် ကတော့ နောက်ထပ်သောက်စရာ ယမကာအသစ်တွေ ထပ်မံရောစပ်ပေးပြန်တယ်။ ကျွန်တော်က သိပ်မသောက်တတ်ပေမဲ့ ကမ်းသော လက်ကို လှမ်းရတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး စကားမပြောမိဘဲ မတ်တပ်ရပ်မိနေကြသေးတယ် အတန်ကြာ။ ကေသီနှင့် ကျွန်တော် စားပွဲမှာထိုင်နေကြတယ် ဟိုဘဲတွေ စားသောက်စရာအမျိုးမျိုးနဲ့ ဧည့်ခံကြတုန်း။ ဂျွန်...ကျွန်တော့်နံဘေးက ဖြတ်သွားတော့ သူ့ဆီးခုံနှင့် မသိမသာပွတ်သပ်မိသေးရဲ့။ သူ့ငပဲ စတင်မာတောင်နေပြီဆိုတာ ခံစားမိလိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ မသိတာကြောင့် ကေသီကို ခပ်တိုးတိုး 'ဘာတွေဖြစ်နေလဲ?' ပြောလိုက်တော့ သူမကပြောတယ် 'Go with the flow' ဆိုပဲ။
အခု အဲလက်စ်နှင့် ကယ်လ်ဗင်တို့ကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ကျွန်တော့်စိတ်တွေ မရိုးမရွဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတယ်။ ဂျွန်.. ကျွန်တော့်နောက်ကိုရောက်နေတာ အလိုလိုခံစားမိတော့ သူ့ဘက်ကို ကျွန်တော်ခေါင်းလှည့်ကြည့်မိလိုက်တာ အံ့သြစိတ်နဲ့ ရှိန်းကနဲ ဖြစ်ရပါ့။ ဂျွန့်ကိုယ်ပေါ်မှာ ဘာအ၀တ်တစ်ခုမှမရှိ သူ့ငပဲဟာ ကျောက်ဆိုင်ကျောက်သားအလား ကျွန်တော့်မျက်နှာနှင့် လက်မအနည်း ငယ်သာ ကွာဝေးတော့တာ။ ရရှိလိုက်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ရပ်အပေါ် ကျွန်တော်မရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းဟာ ဒုံးပျံကျည်ဖူး အလား ရင်ကိုခုန်စေရဲ့။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲတုတ်တုတ်ကြီးကို ဆွဲကိုင်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်တွင်း ထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ကေသီ ကလည်း ကျွန်တော့်အ၀တ်တွေကိုဖယ် ပေါင်ကြားက ညီဘွားကို စိတ်တိုင်းကျ ကိုင်တွယ်ကစားတာပေါ့။ ဂျွန်က ကျွန်တော့်ရဲ့စုတ်မှုတ်မှု ကို ခေါင်းကိုမော့ ခါးကိုကော့ရင်း အရသာခံပါတယ်။ အဲလက်စ်နှင့် ကယ်လ်ဗင်တို့ကလည်း သူတို့အ၀တ်တွေ ကိုယ်ခန္ဓာက ဖယ်ရှားကာ တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတဲ့ ငပဲတွေကို လက်အစုံနှင့်ပွတ်သပ်ကစားနေကြတယ်လေ။ ကျွန်တော် ဒူးထောက်လိုက်ပြီး ဂျွန့်ငပဲကို ပြုစုချိန်မှာ တော့ အဲလက်စ်နှင့် ကယ်လ်ဗင်တို့ ကျွန်တော်ရှိရာကို လာကြတော့တယ်။ ဘယ်ဘက်နားမှာတစ်ယောက် ညာဘက်နားကတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဘေးမှာ။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းအစွန်းမှ ကေသီ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း မြင်ရပါတယ်။ သူမလည်း ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို ဖယ်ရှားထားတာ နို့သီးခေါင်းတွေက မတ်ထောင်လို့။ ပြီးတော့ သူမကိုယ်ပိုင် pussy ကိုကစားနေတာများ ရွှဲရွှဲစိုလို့ပါပဲ။
ကျွန်တော် ဂျွန့်ပစ္စည်းကို ပါးစပ်နှင့် စုတ်မှုတ်နေစဉ်မှာ အဲလက်စ်နှင့် ကယ်လ်ဗင်တို့နှစ်ယောက် ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကို လက်နဲ့အားရ ပါးရကိုင်ကာ ကစားနေပါတယ်။ ကေသီလည်း ကျွန်တော်တို့ ရှိရာကိုလှမ်းလာပြီး သကာလ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို သူမခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေနှင့် ပွတ်သပ်နှိုးဆွလေရဲ့။ လှပတဲ့ သူမတစ်ကိုယ်လုံးဟာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ သူမရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ပြုမူနေရာမှာ ရနံ့တစ်ချို့ ခံစားရရှိသလိုပါပဲ။ ဘယ်ညာနှစ်ဖက်က အဲလက်စ်နှင့် ကယ်လ်ဗင်တို့ရဲ့ ငပဲတွေကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့် ဆွဲကိုင် ကာ ကျွန်တော်ကစားမိတော့ သူတို့တွေ သဘောတကျလိုက်ပါ လှုပ်ရှားကြတယ်။ ဂျွန်ကလည်း ကျွန်တော့်ပခုံးကိုကိုင်ကာ သူ့ငပဲတုတ် တုတ်ကို ခပ်သွက်သွက်အသွင်းအထုတ်လုပ်ပါရဲ့။ သုံးဦးသား မိန့်မူးတက်ကြွသံတွေ ညံနေသလို သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ကေသီလဲ ရွှဲရွှဲစို ပေါ့နော်။
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ အဲလက်စ်နှင့် ကယ်လ်ဗင်တို့ မရှေ့မနှောင်းမှာပဲ ပူနွေးပျစ်ချွဲတဲ့ အရည်ပျစ်တွေ ကျွန်တော့်မျက်နှာ အနှံ့ပက်ဖြန်းပါတော့တယ်။ ဂျွန်ကတော့ နည်းနည်းကြာမှ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းမှ လျှံကျသည်အထိ ပန်းထည့်ပေးတော့ တာလေ။
ဘော်ဒါတွေအားလုံး ခြေပစ်လက်ပစ် ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ချကြတော့မှ အပေါ်ထပ်ကို ရေချိုးဖို့ ကျွန်တော်လှမ်းသွားလိုက်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးစီးကပ်ကပ်ဖြစ်နေပြီမို့လေ။ ကေသီကလည်း ကျွန်တော်နှင့်အတူတူ ရေချိုးမတဲ့။ ရေပန်းအောက်မှာ အတူတူဝင်ကြတုန်း ကေသီက ဒီလို show တစ်ခုမကြည့်ခဲ့ဖူးဘူး သူမစိတ်ကို တကယ်ထကြွစေသတဲ့။ အရက်က ဒီကို တခြားအမျိုးသားတစ်ယောက်နှင့် လာခဲ့ဖူး ပေမဲ့ အဆိုပါလူကတော့ အမျိုးတူယောက်ျားခြင်း ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ အခုဟာက သူမအတွက်အသစ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ရေချိုး ခန်းက ထွက်တော့ ကေသီက ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်သင်ပေးသလို ဆီအချို့ကိုသုံးပြီး ကျွန်တော့် ကို နှိပ်နယ်ပေးတယ်ဗျ။
ကေသီ ခန္ဓာကိုယ်ကို နှိပ်နယ်ပေးရင်း ကျွန်တော့်ငပဲကို ကစားနေစဉ် ဘော်ဒါသုံးယောက် အခန်းထဲဝင်လာကြပါတယ်။ သူတို့အကူအညီ လိုမလားမေးတော့ ကျွန်တော်ကလည်း'Yes' ပေါ့။ သူတို့ ခုတင်ပေါ်လှမ်းတက်လိုက်ကြရင်း ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း အသီးသီးကို စတင် နှိပ်နယ်ကြပါတယ် အသာအယာ။ မိုက်တယ် ခံစားရတဲ့ဖီလင်က။ ဂျွန်...ကျွန်တော့် ပခုံးတွေကို နှိပ်နယ်စဉ်မှာ အဲလက်စ်နှင့်ကယ်လ်ဗင်က ခြေဖ၀ါးအစုံကို နှိပ်နယ်နေကြတယ်။ ကေသီက ကျွန်တော့်ငပဲကို စိတ်ကြိုက်ကစားနေတော့တာလေ။
ကြာရင်ထိန်းနိုင်မှာ မဟုတ်တော့တာကြောင့် ကေသီကိုရော ဘော်ဒါသုံးပွေကိုပါ ကျေးဇူးစကားဆိုရင်း ရပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့တွေ အိပ်ယာပေါ်မှာပဲ ထိုင်ကြရင်း စကားစမြည်ပြောရင်း လက်ကျန်ယမကာလေးတွေကို မော့ဖြစ်ကြတာပေါ့လေ။ ခဏနေတော့ ကေသီက နောက်ပိုင်းကြွက်သားတွေကို နှိပ်နယ်ပေးမယ်လို့ပြောတာကြောင့် အိပ်ယာပေါ်ကို ၀မ်းလျားမှောက်ရင်း အလိုက်သင့်နေပေး လိုက်ပါရဲ့။ ကေသီက ကျွန်တော့်ပခုံးတွေကို နှိပ်နယ်ပေးသလို ဂျွန်နှင့် အဲလက်စ်က ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေကို ပွတ်သပ်ပြီး စနှိပ်ပါ တော့တယ်။ ကယ်လ်ဗင်ကတော့ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေကြားထဲဝင် မာတောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆွဲယူလိုက်ကာ သူ့ပါးစပ်ထဲ သွင်းပြီး နှုတ်ခမ်းသားတွေနှင့် နှိပ်ပေးသတဲ့။ Oh! သူ့အာခံတွင်းက ပူနွေးစိုစွတ်လိုက်တာ။ ကျွန်တော် သိပ်မထိန်းချုပ်နိုင်တော့တာ ကြောင့် ထထိုင်လိုက်တယ်။ ကေသီ့ကို ကျွန်တော်နှင့် 69အနေအထား နေဖို့ပြောလိုက်ကာ စိုစွတ်နုညံ့တဲ့ pussy ကို ကုန်းပြီးရယူ လိုက် တာပေါ့ လျှာဖျားလေးနဲ့စတင်ပြီး။ ကျွန်တော့်ငပဲ တစ်ချောင်းလုံးသည်လည်း သူမပါးစပ်ထဲရောက်ကရော။အဲလက်စ်နှင့် ကယ်လ်ဗင် ကတော့ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို အလုပ်ပေးနေကြတယ်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက် ဂျွန့်ကိုမတွေ့ရပြန်ဘူး။ သူကျွန်တော့်အနောက် တည့်တည့်ကိုရောက်နေပြန်သလို ငပဲကလည်း ပြန်မာတောင်နေပြီ။
ဂျွန်..သူ့ငပဲကြီးဖြင့် ကျွန်တော့်တင်ပါးအကွဲကြောင်းထဲ သွေးတိုးစမ်းစပြုတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ အရမ်း hot နေတော့ ခရေ၀ထဲ ဘယ်တုန်း ကမှ ငပဲတစ်ချောင်းမမြှုပ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ ဘာမှ ဂရုမစိုက်နေတော့ဘူး။ အပျိုစင်ခရေပွင့်ထဲ ဖြည်းဖြည်းသွင်းဖို့ ဂျွန့်ကိုပြောတော့ သူက မစိုးရိမ် ပါနဲ့တဲ့။ ကေသီက ကျွန်တော့်ခရေ၀မှာ ချောဆီတွေရွှဲရွှဲစိုအောင် ထည့်ပေးသလို ဂျွန့်ငပဲကိုစွဲကိုင်ကာ ခရေ၀မှာ အသာ တေ့ပေးပါတယ်။ ဂျွန်..သူ့ငပဲကို တကယ် ညင်သာစွာ တထစ်ခြင်းဖိဖိသွင်းတာ ကွမ်းသီးခေါင်းရဲ့တိုးဝင်မှုကို သိပါသေးတယ် ။ ခဏမှာ တော့ ရင်ထဲဟာဆင်းသွားကာ ရှည်လျားလှသည့် ငပဲတစ်ချောင်းလုံး ကျွန်တော့ခရေ၀ထဲ မြှုပ်သွားပါရော။ ခပ်ဖြေးဖြေးအထုတ်အသွင်း လုပ်တာ အစပိုင်းမှာ နာကျင်ရပေမဲ့ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ နာကျင်မှုရဲ့ တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။
'Oh....Oh...အာ...အ..ရှီး' ဘယ်လိုဖီလင်မှန်းမသိဘူး အရမ်းကောင်းတာပါ။ ဂျွန်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုမှာမျောပါရပါပြီ။ သန်မာ တဲ့ ကျွန်တော့်ခရေကြွက်သားများရဲ့ အညှစ်အပြုကြောင့် သူကြာရှည်မထိန်းနိုင် အပြင်ကိုဆွဲထုတ် တင်ပါးတွေပေါ် ပန်းထုတ်လိုက်သလို ကျွန်တော့်မှာ ကေသီရဲ့ ခပ်သွက်သွက်ကစားနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေထဲ တစ်ပြိုင်တည်းလိုလို ပန်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၅ ယောက်သား အားလပ်ရက် ၃ရက်စလုံး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အပြန်အလှန် -ိုးနေကြတာ နောက်ဆုံးရက်မှာတော့ condom တွေလည်းကုန် တနေကုန်တနေခန်း အိပ်ပျော်သွားဖြစ်ကြတယ်လေ။
ကျောင်းတက်ရက်ကျရင် မျက်ကွင်းတွေပဲ ချောင်နေမလား? ဒူးတွေပဲချောင်နေမလား?
Alex Aung (25-1-2011)
Posted by Alex Aung at 1:52 PM
လူငယ်ထုတွေကြား လိင်တူချင်း ချစ်တဲ့သူတွေအပေါ် မုန်းတ...
ဖခင်နှစ်ယောက်၏ မျိုးရိုးဗီဇဖြင့် ရင်သွေးမွေးဖွားမှု...
၂၀၁၀အတွင်း လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာမည်ကျော...